Vanhu: Usashandise mhuka inouraya honye mushonga we COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Vanhu: Usashandise mhuka inouraya honye mushonga we COVID-19
Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • nhau • chengetedzo • ushanyi • Akasiyana Nhau
Mishonga yemhuka isina kuitirwa vanhu
Hutano Canada yakapa chikumbiro nekuchimbichimbi kuvagari vayo kuti vasashandise mushonga wemhuka unonzi Ivermectin kurapa COVID-19 kana kuyedza kudzivirira kuwana coronavirus.
Ivermectin chinhu antiparasitic mumiriri muchimiro mapiritsi, namatidza, nomumukanwa mhinduro, jekiseni mhinduro, medicated premix, kana kukamura uchishandisa.
Hutano Canada yakapa chirevo kuvagari vayo ichiti kana uyu mushonga watengwa nechinangwa ichi, uurase nekukasira.
Nyanzvi yezvehutano inofanirwa kubvunzwa kana chigadzirwa ichi chashandiswa uye paine zvinetswa zvehutano.
Vanhu vanoshandisa zvinodhaka zvemhuka kana dzimwe nzira dzakasiyana hachisi chinhu chitsva kana totaura nezvehutano. Mukuru weIndia Medical Association aifanirwa kunyevera vagari veIndia nezve tsika yekuzvifukidza mu manyowa emombe uye weti musanganiswa semushonga wecoronavirus.
Hutano Canada yakagamuchira maererano nemishumo yekushandiswa kweveteriectin ivermectin kudzivirira kana kurapa COVID-19. Vanhu vemuCanada havafanirwe kudya zvigadzirwa zvehutano zvakagadzirirwa mhuka nekuda kwenjodzi dzakakomba dzehutano dzinoitwa navo.
Muchiedza ichi, Health Canada iri kuraira maCanada kuti vasashandise kana iyo zvipfuyo kana zvevanhu zvinodhaka zvinodhaka zveIvermectin kudzivirira kana kubata COVID-19. Iko hakuna humbowo hwekuti ivermectin mukuumbwa chero kupi kwakachengeteka kana kushanda kana ikashandiswa kune izvo zvinangwa. Iyo vhezheni yemunhu ye ivermectin inobvumidzwa kutengeswa muCanada chete kurapwa kwehutachiona hwehutachiona hwevanhu.
Iyo yemhuka vhezheni ye ivermectin, kunyanya pamadosi epamusoro, inogona kuva nengozi kuvanhu uye inogona kukonzeresa matambudziko akakomba ehutano sekurutsa, manyoka, kukwira kweropa, kurwara, dzungu, kufenda, kufenda, uye kunyangwe rufu. Ivermectin zvigadzirwa zvemhuka zvine yakakwira yakadzika dhosi pane ivermectin zvigadzirwa zvevanhu. Dhipatimendi rinoziva nezve dzakawanda mishumo yevarwere muUS avo vanga vachida rutsigiro rwekurapa uye vakaiswa muchipatara mushure mekushandisa ivermectin yakagadzirirwa mabhiza.
Hutano Canada iri kunyatsoongorora zvese zvingangoita zvekurapa kweECOVID-19, kusanganisira marapirwo ari kuongororwa mumayedzo emakiriniki epasi rese. Parizvino, Hutano Canada haisati yagamuchira chero kutumira zvinodhaka kana kiriniki kutongwa kunyorera ivermectin yekudzivirira kana kurapwa kwe COVID-19.
Kune zvinodhaka zvine mukana wekubatsira pakurapa COVID-19, Health Canada inokurudzira vagadziri vezvinodhaka kuitisa kiriniki miedzo. Izvi zvinopa mukana kune vehutano nharaunda kuti vatore ruzivo nezve kushanda kwehutano pamwe nenjodzi dzakabatana.
Kana mugadziri akaendesa ku Health Canada zvine chekuita nekushandiswa kwe ivermectin kudzivirira kana kurapa COVID-19, Health Canada ichaitisa ongororo yesainzi yehuchapupu hwekuona mhando yemushonga, chengetedzo, uye kushanda.
Hutano Canada ichaenderera mberi nekuongorora mamiriro ezvinhu uye ichatora matanho akakodzera uye akakodzera kana ruzivo rutsva rukawanikwa, kusanganisira chero ruzivo rwekushambadzira zvisiri pamutemo kana kutengeswa kweivermectin. Hutano Canada ichataurawo chero ruzivo rutsva rwekuchengetedza kune vashandi vezvehutano nevatengi.
Hutano Canada yakamboyambira maCanada nezve zvigadzirwa zvinogadzira nhema uye zvinotsausa zvokurapa kana kuporesa COVID-19. Kuti uwane ruzivo nezve Hutano Canada yakabvumidza majekiseni nemishonga, shanyira Canada.ca.
Ivermectin, chinodhaka chinodhaka chigadzirwa, chinobvumidzwa kutengeswa muCanada kurapwa kwehutachiona hwehutachiona hwehutachiona muvanhu, kunyanya mudumbu solidyloidiasis uye onchocerciasis, uye inongofanirwa kushandiswa pachinangwa ichi, pasi pekutarisirwa kwehunyanzvi hwehutano. Iyo yemhuka vhezheni yemushonga uyu inowanikwa kurapa hutachiona hwehutachiona mumhuka. Vanhu havafanirwe kumboshandisa iyo veterinary vhezheni yechigadzirwa ichi.
Zvinofanira kuitwa nevatengi
Kana ivermectin yakatengwa kuitira kudzivirira kana kurapwa kwe COVID-19, mira kuishandisa uye uirase. Tevedza matunhu ekanzuru kana ematunhu marangi ekurasa makemikari uye imwe tsvina ine njodzi, uye dzosera chigadzirwa kunzvimbo yekutengesa kuti chiraswe nenzira kwayo.
Bvunza nyanzvi yehutano kana ivermectin yashandiswa uye paine zvinetswa zvehutano. Mhan'arira chero mhedzisiro kubva pachigadzirwa ichi zvakananga kuhutano Canada. Tumira chichemo kuHealth Canada kana chero ruzivo rwune chekushambadzira zvisiri pamutemo kana kutengeswa kweivermectin kana chero chimwe chigadzirwa chehutano uchishandisa fomu rekunyunyuta repamhepo richizivikanwa.